सार्वजनिक गाडी नचलेपछि सडकमा ट्याक्सी र ई–रिक्साको मनपरि, सरकार कहाँ छ ? – Nepal News
सार्वजनिक गाडी नचलेपछि सडकमा ट्याक्सी र ई–रिक्साको मनपरि, सरकार कहाँ छ ?
सरकार कमजोर, सिण्डिकेटधारीको मनोबल बढ्दै
काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक सडक कसरी निजी क्षेत्रको कब्जामा गएको रहेछ र आम जनता कस्तो मारमा पर्दै आइरहेका छन् भन्ने प्रमाण शुक्रबार सिण्डिकेटवालाले खाली गराएको सडकको दृश्यले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो लाग्छ कि सार्वजनिक सडक भनेको यात्रुहरुलाई लुट र खस्यौट गर्ने स्थल हो, जहाँ सरकारको कुनै उपस्थिति छैन ।
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधनहरु ग्यारेजमा थन्क्याउने निर्णय गरे पनि काठमाडौंका सडकहरुमा भाडाका ट्याक्सीहरु चलिरहेका छन् । उनीहरुले १ सय रुपैयाँ लाग्ने बाटोमा यात्रुहरुलाई एक हजाररुपैयाँसम्म शुल्क लिएर ठग्न थालेको यात्रुहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौंबा ट्याक्सीहरुले मिटरमा यात्रु बोक्न छाडेको धेरै समय भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार निरीह र मूकदर्शक बन्दै आएरहेको छ । गृहमन्त्रालयले ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई मिटरमा यात्रुसँग भाडा लिने नियम लगाउन सकेको छैन ।
यसैवीच व्ययवसायीले भाडाका सवारी बन्द गरेपछि काठमाडौंमा शुक्रबार बिहानैदेखि ट्याक्सीवालाहरुको ठगी धन्दा मौलाएको छ ।
यात्रुहरु अन्य विबल्प नभएकाले तेब्बर चौबर पैसा तिरेर हिँड्न बाध्य छन् ।
यातायात क्षेत्रमा सरकार कतिसम्म निरीह र निकम्बा रहेछ भन्ने पनि शुक्रबारको बन्दले खुलासा गरिदिएको छ । सिण्डिकेटवालाले सडक खाली गरिदिँदा सरकारसँग कुनै विकल्प छैन ।
राजधानीमा साझा बसले केही यात्रुहरु ओसारिरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यस्तै कम्पनीमा दर्ता भएको मयुर यातायात काठमाडौंबाट भकुण्डबेंसीसम्म चलेको छ । तर, सरकारले यात्रुहरुको समस्या सम्वोधन गर्न सकेको छैन । काठमाडौं बाहिरका शहरमा त झनै सरकारको उपस्थिति छैन ।
यस्तो अवस्थामा विगतमा सेना र प्रहरीहरुले पनि केही गाडीहरु यात्रुका लागि चलाउने गरेकोमा शुक्रबार सडकमा त्यस्तो दृश्य देखिएको छैन । सरकारले यात्रुहरुमाथि परेको मारप्रति कुनै विकल्प सोचेको देखिँदैन । र, यही अवस्था रही रहे सिण्डिकेटका पक्षधरहरुको मनोवल बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
राजधानी बाहिर ई–रिक्साको मनपरी
काठमाडौंमा ट्याक्सीवालाहरुले दिन दहाडै यात्रुलाई ठगिरहेका बेला काठमाडौं बाहिर ई–रिक्साको ठगीधन्दा मौलाएको छ । सडकमा जंगली राज चलेको छ, जहाँ सरकारको कुनै नीति नियम छैन, निजी सवारीको मनपरी छ ।
राजधानीमा जस्तै तराईका जिल्लाका यात्रुहरु ई–रिक्सामा महंगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न वाध्य भएका छन् ।
‘हामीलाई हड्ताल छ भन्ने थाहा थिएन, एक्कासी बुटवल आएपछि थाहा पायौं’– भारतमा रोजगारी गर्दै आएका कैलालीका मनोट भट्टले भने–‘गाउँमा जानैपर्ने आकस्मिक कामले गर्दा छुट्टी मिलाएर आएको, अब कसरी पुग्ने होला ?’ -अनलार्इनखबरबाट